रिडी हाइड्रो पावरले ५० करोड १० लाखको हकप्रद सेयर जारी गर्ने - UrjaKhabar Urja Khabar - Nepal's No. 1 energy based online portal.
रिडी हाइड्रो पावरले ५० करोड १० लाखको हकप्रद सेयर जारी गर्ने
असार २०, २०७५ 1185 ऊर्जा खबर/काठमाडौं
रिडी हाइड्रो पावर कम्पनीले ५० करोड १० लाख रुपैयाँबराबरको हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने भएको छ । कम्पनीले साढे ८ मेगावाटको सोलार आयोजनामा लगानी गर्न संस्थापक, स्थानीय र सर्वसाधारण सेयरधनीका लागि कुल चुक्ता पुँजीको सतप्रतिशत (१ः१ अनुपात ) सेयर निष्कासन गर्न लागेको हो ।
गत असार १८ गतेको सञ्चालक समिति बैठकले हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रस्ताव वार्षिक साधारणसभामा लैजाने निर्णय गरेको सञ्चालक आलोक केसीले बताए । केसीका अनुसार हकप्रद सेयर जारी गर्ने सञ्चालक समितिको प्रस्ताव साधारणसभाबाट पारित भएपछि अनुमतिका लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा दर्ता गरिनेछ ।
कम्पनीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणको जोगिकुटी सबस्टेसनमा जोड्ने गरी साढे ८ मेगावाटको सोलार आयोजनाको अनुमतिपत्र लिएको छ । हकप्रद सेयरबाट संकलन भएको पुँजी सोलार आयोजनामा लगानी हुने पनि केसीले बताए । ‘कम्पनीले बैंकसँग ऋण लिएर सोलार आयोजना निर्माणको काम गर्छ,’ उनले भने,‘धितोपत्र बोर्डले स्वीकृति दिएपछि हकप्रद सेयर बिक्रीबाट उठेको रकमले ऋण चुत्ता गर्छौ ।’
विद्युत प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद सम्झौता (पिपिए) गरेर सोलार आयोजनाको जडान प्रक्रिया सुरु गरिने कम्पनीले जनाएको छ । प्राधिकरणले प्रतियुनिट ७.३० रुपैयाँमा कम्पनीले जडान गर्ने सोलार आयोजनाको पिपिए गर्ने भएको छ । जडान सुरु भएको एक वर्षभित्र सोलार आयोजनाको विद्युत सबस्टेसनमा जडान गर्नुपर्नेछ ।
कम्पनीले यसअघि गुल्मीमा २.४ मेगावाटको रिडी जलविद्युत केन्द्र निर्माण गरी ८ वर्षदेखि नियमित विद्युत उत्पादन गर्दै आएको छ । बैंकको सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरेको कम्पनी अहिले नाफामा छ ।
कम्पनीले विद्युत उत्पादनबाट हुने नियमित आम्दानी अर्को आयोजनामा पनि लगानी गरेको छ । पाँचथरमा निर्माणाधीन ९.९ मेगावाटको इवाखोला जलविद्युत आयोजनामा पनि स्वपुँजीको २५ प्रतिशत लगानी गरेको छ ।